Salaamanews » Kooxda Shabaab oo ku dhawaad boqol macallin ku xirtay gobolka Galgaduud
Home » Warar Kooxda Shabaab oo ku dhawaad boqol macallin ku xirtay gobolka Galgaduud Print - Daabace: SalaamaNews - Jan 4th, 2013 // Ka Jawaab	Qoraallo La Xiriira
Dagaal maalintii labaad ka dhacay Gedo oo looga adkaaday ururka al-ShabaabMadaxweynihii hore ee Soomaaliya oo ka jawaabay eeddii uu u soo jeediyay Wasiirka arimaha dibadda Kenya Kooxda Al-shabaab oo iskeed iskaga baxday magaalada Ceel-buur iyo meelo kaleRa’isal wasaare Shirdoon “Waa in dowladdu isballaarisaa”Ciidamada Huwinta ah oo Qabsaday Deegaanno horleh oo ka tirsan Jubada Hoose
Warar lagu kalsoonyahay oo ku dhaw kooxda Al-shabaab ayaa sheegaya in horjoogaha kooxda Al-shabaab ee gobolka Galgaduud Xasan Yacquub, uu amray in xabsiga la dhigo dhamaan culimada heysta madhabka aanay rabin kooxda Al-shabaab.
Goob jooge magaciisa sababo amaan u qariyay ayaa taleefanka Ceeldheere SN ugu sheegay in qafaalka culimada uu billowday goor hore oo Jimcaha maanta ah, mana jirto sabab cad oo culimad loo xabsiyay.
Guddoomiyihii hore ee degmada Ceeldheer Xuseen Maxamed ayaa saxaafadda u sheegay in ururka Al-shabaab ay culimada xirtay kaddib markii ay ka biyo diideen inay Al-Shabaab dagaalyahanno u qoraan.
“Kooxda Al-shabaab ee khawaarijta ah ayaa xirtay 100-macallin oo diiday inay askar u qoraa, waxaa macallimiintu lagu eedeeyay inay qabaan fikirka culimada ahlu sunnah” ayuu yiri Maxamed.
Culimada la xiray ayaa isugu jiray macallimiin dugsiyo qur’aan, wadaaddo kitaabbada cilmiga dadka bara iyo mashaa’iiq kale, mana jirto eedo muuqda oo ay geysteen.
Mr. Maxamed ayaa sheegay in culimada lagu xiray xero ay kooxda Shabaabtu ku leedahay degmada Ceeldheere, waxaana jirin dadaal ay dad dhiirran kara ku soo badbaadi karaan macallimiinta.
Tags: warar « Qoraalkii HoreDuqeymaha diyaaradaha aan cidina wadin “Drones” oo daciifiyay awoodda Al-qaacidda	Qoraalka Xiga »Puntland oo soo bandhigtay sir ku saabsan Al-shabaab kadib dagaal ka dhacay gobolka Bari	Halkan Hoose ku Jawaab